Fudud oo loogu talagalay adeegyo caafimaad oo leh AutoCAD - Geofumadas
Ku rakib adeega ecwo leh AutoCAD
ERDAS waxay hadda ku dhawaaqday faahfaahin cusub oo loogu talagalay AutoCAD taas oo u oggolaanaysa helitaanka sawirrada (ECW iyo JPEG 2000) iyada oo la adeegsanayo qaynuunka loo yaqaan ECWP.
ECW waa nooc ka mid ah faa'iidooyinka badan, badanaa ku xejinta aan lahayn tayada khasaare weyn, maaddaama sawirka sawirka ee 200 MB uu miisaami karo 8 MB; si aad ah u adeegsanaya ujeedooyinka moobilka iyo daabacaadda webka.
Waxaa la fahamsan yahay in la plugin this, codsiyada AutoCAD (desktop) oo hadda ku xidhan karto IWS adeegyada, waxa la filayaa in shirkado badan oo ay ka faa'iidaystaan ​​inay helaan images aan haysan si ay iyaga ugu yeedho via Tababaraha raster ... iyo waa ku baabbi'iyee khayraadka yar PC
Waxaa loo heli karaa nuqulada 2007, 2008 iyo 2009 oo leh AutoCAD Map3D iyo 3D madani, si aad u soo dejiso waa inaad soo booqataa cinwaankan
iyo si aad u ogaato waxqabadka iyo kartida, aqoon-isweydaarsi online (webinar) 25 June 2008 oo aad ku biiri karto.
Post Previous«Previous Lambarada cagaaran
Post Next Khariidadaha Stitch, si ay u soo dejiyaan sawirrada moobilka Google EarthNext »
2 Jawaab ah "Plugin for adeegga ecwashooyinka leh AutoCAD"
Haa, waxay umuuqataa inaysan hadda ka sii jirin isku xirkaas. Waa lagama maarmaan in la fiiriyo bogga Erdas, si loo arko haddii weli la heli karo.
tamke isagu wuxuu leeyahay:
Xidhiidhku wuu maqan yahay.